बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना प्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुढिगण्डकी जलविधुत परियोजना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भविष्यलाई थप अन्यौल तर्फ धकेल्ने गरी मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको ...
प्रधानसेनापति र अमेरिकाको सहायक रक्षामन्त्री बीच शिष्टाचार भेटवार्ता
काठमाडौं । प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायक रक्षामन्त्री Mr. Randall G. Schriver बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । विहिबार उनीहरुबीच जंगी अड्‍डामा शिष्टाचार भेटवार...
छ जिल्लामा महिला सिडियो
काठमाडौं । सरकारले छ जिल्लामा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाएको छ । उपनिर्वाचनको नतिजापछि सरकाले ६ जिल्लामा महिला सिडियोलाई खटाएको हो । भक्तपुरमा हुमकला अधिकारी, रामेछापमा लिलाकुमारी केसी पाण्डे, प...
साइक्लिङमा लक्ष्मीले बाजी मारेसँगै नेपालको स्वर्ण संख्या ३१ पुग्यो
काठमाडौं । १३‌ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग)मा बिहीवार नेपालले थप् स्वर्ण पदक हासिल गरेको छ । क्रस-कन्ट्री साइक्लिङमा लक्ष्मी मगरले स्वर्ण पदक जितेसँगै नेपालले स्वर्ण पदकको सङ्ख्या ३१ पुर्याएको हो । ...
पाल्पामा जीप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पाल्पामा जीप दुर्घटनामा परि दुई जनाको निधन भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको केराबारी र चौबिस माइलको बीचमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हाे । बुटवलबाट पाल्पाको तान...
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तयारी भएको छ । महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचारार्थ प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० दिनप...
नेपालले भुटानलाई ९५ रनमै समेट्दा १४१ रनले जीत
काठमाडौं । राजधानीमा जारि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता(साग) अन्तर्गत आज पाचौँ दिन भएको खेलमा नेपाली क्रिकेट टीमले भुटानलाई निर्धारित २० ओभरको खेलमा ६ विकेटको क्षतिमा ९५ रनमै समेट्यो । भुटानलाई स...
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेता किमलाई ‘रकेट म्यान’ भनेर सम्बोधन गरेपछि..
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले सैन्य कारवाही गर्ने अमेरिकाको धम्की विरुद्ध बोलेको छ ! उत्तर कोरियाका सशस्त्र बलका प्रमुखले हिजो(बुधवार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै किम जोंग उन सरकारलाई सैन्य कारवाहीकालागि धम्क...
काठमाडौं । दैलेख,गुँरास गाउँपालिका-४ रानीमत्ता चेकपोष्टमा जाँच गर्ने क्रममा अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ११ दशमलब ५०ग्राम सहित ४ जनालाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ प...
सिलिन्डर विस्फोट हुँदा २३ को मृत्यु
सुडान । सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित् रहेको एक सेरामिक कारखानामा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा २३ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा परी कम्तिमा १ सय ३० जना घाइते भएका छन । कारखानमा ६० जना भारतीय श्रमिक का...
स्वरसम्राट नारायण गोपालको २९ औँ स्मृति दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जीन्दगीमा एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा दिपक जंगमको शब्द रहेको माथि उल्लेखित गीत स्वर सम्राट नारायाण गोपालको आवाजमा रहेको सर्वकालीन गीत हो ।आज उनै स्वर स...
टि–ट्वान्टी क्रिकेटमा नेपालको सर्वाधिक रन, नेपालले दिएको लक्ष्य पछ्याउँदै भुटान
काठमाडौं । राजधानीमा जारि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता(साग) अन्तर्गत आज पाचौँ दिन भएको खेलमा पाली क्रिकेट टीमले अन्तराष्ट्रिय टि–ट्वान्टी क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाएको छ । भुटान विरुद्ध पहिले व्या...
१३ औं साग प्रतियोगिता: नीमाले जितिन उसुको नानछवान अलराउन्डमा स्वर्ण
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग( अनतर्गत उसुको नानछवान अलराउन्डमा नेपालकी नीमा घर्तीमगरले स्वर्ण जित्न सफल भएकी छिन् । विहिबार भएको उसुमा नीमाले स्वर्ण पदक जितेकी हुन । उनले १८.९१ अंक प...
बेलायतले पठायो पहिलो महिला राजदूत
काठमाडौं । नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी नवनियुक्त राजदूत निकोला पोलिटले हिजो(बुधबार) आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेकी छन्। नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन...
उपत्यकासहित देशभर चिसो बढ्यो, काठमाडौं ५.५ डिग्रीमा झर्यो
काठमाडौं । मौसममा आएको बदलीसँगै उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आज बिहान ०६:३० बजे मापन गरिएको तापक्रम ५.५ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । बुधबार उपत्यकाको तापक्रम ५.८ डिग्री सेल्सि...
अमेरिकी नौसेनाको शिपयार्डमा गोलाबारी
एजेन्सी । अमेरिकी नौसेनाको पर्ल हार्बर शिपयार्डमा हिजो(बुधबार) गोलाबारी भएको छ । दिउँसो साढे २ बजेतिर एक बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए । सुरक्षा स्थिति हेर्दै तत्काल शिपयार्ड नै बन्द गरिएको छ । रसिया...
जहाजसँग जंगली जनावर बँदेल ठोक्कियो
नेपालगन्ज विमानस्थलमा जहाजसँग जंगली जनावर बँदेल ठोक्किएको छ। काठमाडौंबाट नेपालगन्ज ल्यान्ड हुँदै गरेको बुद्ध एयरको जहाजसँग बँदेल ठोक्किएको हो। जहाज ल्यान्ड हुने क्रममा पछाडिको चक्कामा बँदेल ठोक्किएको ...
सागको पाचौं दिन : आज १७ खेल हुँदै, कुन खेल कहाँ ?
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको पाँचौं दिन आज(बिहिबार) काठमाडौं र पोखरामा गरी विभिन्न १७ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । १७ मध्ये पाँचवटा खेल आजैबाट शुरु हुन लागेका हुन् । सागक...
१३ औँ साग : आर्चरी खेलमा भारत र पाकिस्तान सहभागी नहुने
कास्की । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत आर्चरी खेलमा पाकिस्तान अन्तिम समयमा आएर सहभागी नहुने भएको छ । मङ्गलबारसम्म आर्चरीमा सहभागी हुने जनाएको पाकिस्तानले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो आन्तरिक क...
निलम्बित डीएसपी ढुंगेललाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमाेद ढुंगेललाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । तर, अनुमति दिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि प्रह...